Tsy mafy noho ny krizy nolalovan’ny firenena toy ny tamin’ny 2002 ity valanaretina coronavirus ity, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nitafa nivantana tao amin’ny fahitalavi-pirenena ny talata 24 marsa 2020 tamin’ny 8ora alina.
Tamin’io fotoana io ihany koa no nanambarany ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fanjakana hampihatra ny « Plan d'urgence social » na Planina ara-tsosialy hanalefahana ny fiantraikan’ny fihibohan’ny olona an-trano sy ireo marefo ara-pivelomana.
Anisany nambarany tamin’izany ny hisian’ny famatsiana sakafo toy ny vary, voamaina, siramamy, savony, koba aina … ho an’ireo fianakaviana tena voadona noho ny tsy fahafahana miasa manomboka amin'ny Alakamisy 26 marsa izao.
Hisitraka izany ireo tsy manankialofana (4’Mi), mpanasa lamba, mpivarotra amoron-dalana, mpivarotena, mpivarotra gazety, mpitondra taxi, mpamily taxibe sy resevera…
Vola 10 miliara Ariary, amin’izao tapany voalohany izao, no hatokan’ny fanjakana ho amin’ity « Plan d'urgence social » ity izay hiarahana miasa amin'ny FID (Fonds d'Intervention pour le Développement) ary manomboka amin'ny herinandro ho avy ny fitsinjarana izany.
Hisy ny fanalefahana ny fandoavana faktiora Jirama ka tsy hisy fanapahana jiro na rano, toy izany koa ny famerenana vola notrosaina tamin’ny banky.
Hisy fanalefahana ara-ketra ho an’ny orinasa.
Hohararaotina izao fotoana izao, hoy ny filoha, ny hanamboarana ireo lalana simba eto Antananarivo sy Toamasina.